Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) - Hello Sayarwon
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်)
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် Apo piroxicam ကို အများဆုံး အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ် (ကျောရိုးပင်မအာရုံကြောကြီးရဲ့ အဆစ်တွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်ရင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)။
Apo piroxicam ဟာ နာကျင်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတမျိုး ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ထွက်ရှိလာတာကို လျှော့ချပေးခြင်းအားဖြင့် နာကျင်မှုတွေကို လျော့ပါးစေပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာအိမ် ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် apo piroxicam ကို အစာစားပြီးပြီးချင်း သောက်နိုင်သလို နွားနို့နဲ့လည်း သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးကို ချိုးပစ်တာ ဒါမှမဟုတ် ဝါးစားတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Apo piroxicam ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ apo piroxicam ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
apo piroxicam ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Apo piroxicam ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Apo piroxicam ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
apo piroxicam ကို မသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြထားပါ။
apo piroxicam ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ASA ဒါမှမဟုတ် အခြားသော စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ မတည့်ခြင်း (ဥပမာ ibuprofen, ketorolac, diclofenac)။
apo piroxicam ကြောင့် ဓါတ်မတည့်ဝေဒနာများ ခံစားရခြင်း (ဥပမာ နှာရည်ယိုခြင်း၊ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ခြင်း၊အနီစက်များထွက်လာပြီး ယားယံခြင်း၊နှာခေါင်းတွင်း အလုံးလေးများ ဖြစ်လာခြင်း၊မျက်နှာ၊လည်ချောင်း၊လျှာ စသည်တို့ ဖောရောင်ဖောင်းကားလာခြင်း)။
ကိုယ်ဝန်တတိယ သုံးလပတ်ထဲ ရောက်နေခြင်း။
သွေးယိုစီးသော ပြဿနာများ ရှိခြင်း။
ulcerative colitis နဲ့ Crohn’s disease တို့ကဲ့သို့သော အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများရှိခြင်း။
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းတွင် အနာများရှိခြင်း၊ထိုအနာများမှ သွေးယိုစီးခြင်း။
နှလုံးသွေးကြောခွဲစိတ်မှု အကြီးစားလုပ်ရန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် မကြာသေးမီကမှ လုပ်ထားခြင်း။
အသည်းရောဂါရှိခြင်း သို့မဟုတ် အသည်းဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးခြင်း။
အကယ်၍ သင့်အူလမ်းကြောင်းမှာ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေရှိနေမယ် ဒါမှမဟုတ် စအိုကသွေးယိုတာမျိုးတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ စအိုတွင်းထည့်ဆေးတောင့်ပုံစံ (အရပ်ခေါ် ဂြိုလ်တု)ကို အသုံးမပြုရပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ဒီဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး (အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်တတိယ သုံးလပတ်မှာပေါ့)။ တကယ်လို့ ဆေးသောက်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံး အသိပေးရပါမယ်။Piroxicam ဟာ ကလေးရနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေတာမို့ သင့်အနေနဲ့ ကလေးရဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ကလေးရဖို့ ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ဆေးကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
Piroxicam ဟာ မိခင်နို့ထဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်တာမို့ သင့်အနေနဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ်မှာ ဒီဆေးကို သုံးစွဲနေမယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးကို ထိခိုက်မှု ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ဆက်လက်ပြီး နို့တိုက်သင့်၊မတိုက်သင့် သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အစာချေရည်များ လည်ချောင်းထဲ ဆန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူခြင်း၊အစာမကြေခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ သိပ်မရှိပေမယ့် ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း အချိန်မှီ မကုသနိုင်ရင် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာတွေဆီကို ဦးတည်သွားနိုင်တဲ့အတွက် အဆိုပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်ကို အမြန်အသိပေးရပါမယ်။
သွေးယိုစီးခြင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (ဥပမာ ပုံမှန်မဟုတ်သော နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊သွေးခြေဥခြင်း၊ဆီးထဲသွေးပါခြင်း၊ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း၊သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း၊ထိခိုက်ရှနာတခုခုဖြစ်လျှင် အတော်နှင့် သွေးမတိတ်ခြင်း)။
စိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (ဥပမာ အာရုံစူးစိုက်မရခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊အအိပ်အနေပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊မည်သည့်အရာကိုမှ စိတ်မပါခြင်း၊သတ်သေလိုသော အတွေးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း)။
နေရောင်ကြောင့် အသားအရေ ပိုမိုပျက်စီးလာခြင်း။
(စအိုတွင်းထဲ့ဆေးတောင့်များထည့်လျှင်) စအိုတွင်း နီရဲနာကျင်ကသိကအောင့်ဖြစ်ခြင်း။
အသည်းပြဿနာရှိခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊အသားဝါခြင်း၊မျက်ဖြူသားဝါခြင်း၊ဆီးမည်းခြင်း၊ဝမ်းအရောင်ဖြူဖျော့ခြင်း စသည်)။
ဆီးနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ (ဥပမာ ဆီးအိမ်နာကျင်ခြင်း၊ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ဆီးရွှင်ခြင်း စသည်)။
(စအိုတွင်းထည့် ဆေးတောင့်ထည့်လျှင်) စအိုမှ သွေးယိုခြင်း။
တုပ်ကွေးကဲ့သို့သော လက္ခဏာများ ပေါ်လာခြင်း (ဥပမာ တကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊အဖျားတက်ခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း)။
အစာချေရည် အထက်သို့ ဆန်တက်သဖြင့် ရင်ပူခြင်း။
အောက်ပါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဆေးသုံးစွဲခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို ခံယူရပါမည်။
ဆီးအရောင် သို့မဟုတ် ပမာဏပြောင်းလဲလာခြင်း။
ကူးစက်ပိုးကြောင့် မဟုတ်သော ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ လည်ပင်းတောင့်တင်းနေခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဖျားခြင်း သို့မဟုတ် သတိလစ်မေ့မျောခြင်း)ကို ခံစားရခြင်း။
အစာအိမ်သွေးယိုခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ ကတ္တရာစေးကဲ့သို့သော ဝမ်းမည်းမည်းများသွားခြင်း၊သွေးအန်ခြင်း၊ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း၊ကော်ဖီအနှစ်ရောင်များ အန်ခြင်း)ကို ခံစားရခြင်း။
ရုတ်တရက်နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ထိုသို့ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် ပုခုံးနှင့် လက်မောင်းထိ ပျံ့သွားခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ချွေးစေးများ ပျံခြင်း)ကို ခံစားရခြင်း။
ပြင်းထန်သော အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများ (ဥပမာ အရည်ကြည်ဖုများထခြင်း၊အရေပြားကွာကျခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊အနီစက်များလျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊အနီစက်ထွက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဖျားနာခြင်း သို့မဟုတ် မအီမသာဖြစ်ခြင်း)ကို ခံစားရခြင်း။
လေဖြတ်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ (ဥပမာ ရုတ်တရက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ရုတ်တရက် မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ခြင်း၊အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း၊ရုတ်တရက် စကားပီသစွာ မပြောနိုင်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းတစုံတရာ မရှိဘဲ အားနည်းခြင်း၊ခြေလက်တို့ ထုံကျဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်း စသည်)ကို ခံစားရခြင်း။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ (ဥပမာ အင်ပျဉ်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊မျက်နှာ၊ပါးစပ်၊လည်ချောင်း သို့မဟုတ် လျှာတို့ ဖောင်းကားရောင်ရမ်းခြင်း)။
ဘယ်ဆေးတွေက Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Apo piroxicam ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Apo piroxicam က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Apo piroxicam ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အောက်ပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက ဒီဆေးအပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်းရေဓါတ်နဲ့ electrolyte ဓါတ်များ ပမာဏမျှတညီညွှတ်မှု။
ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ခြင်း နှင့် လေဖြတ်ခြင်း။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် အနာများရှိခြင်း၊အဆိုပါ အနာများမှ သွေးယိုစီးခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တနေ့လျှင် piroxicam သောက်သုံးနိုင်သည့် သတ်မှတ်အကြံပြုထားသော ပမာဏမှာ လိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး ၁၀ – ၂၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါသည်။၂၀မီလီဂရမ်ကို တကြိမ်တည်း သောက်နိုင်သလို ၁၀ မီလီဂရမ်စီ နှစ်ခါခွဲပြီးလည်း သောက်နိုင်ပါသည်။
တနေ့တာအတွက် အများဆုံးသောက်နိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၂၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါသည်။piroxicam ကို စအိုတွင်းထည့် ဆေးတောင့်အဖြစ်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။piroxicam အနည်းဆုံးပမာဏကို ကာလအတိုဆုံးအသုံးပြုရမည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
ကလေးတွေအတွက် Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ ပေးရမယ့် ဆေးပမာဏကို သေချာစွာ သတ်မှတ်ထားရခြင်း မရှိသေးပါ။ ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Apo Piroxicam (အပို ပိုင်ရိုဆီကမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
apo piroxicam ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့် ၁၀ မီလီဂရမ်။
ဆေးတောင့် ၂၀ မီလီဂရမ်။
Apo piroxicam ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 16, 2017
Accessed November 24, 2016
Apo-Piroxicam. http://chealth.canoe.com/drug/getdrug/Apo-Piroxicam. Accessed